Wednesday September 12, 2018 - 20:41:53 in Maqaallo by Radio Maanta
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Mubaarak ayaa waxay sheegayan in ciidamo isugu jira Cadaan iyo Soomaali ay weerar xoogan ku qaadeyn dagaalyahano katirsan Al-shabaab oo halkaasi fariisin kulahaa.
Ciidanka Bancroft oo ay wehlinayeen ciidan cadaan ah ayaa Xalay xili danbe waxay weerar qorsheeysan ku qaadeyn deegaanka Mubaarak oo ay ku sugnaayen Al-shabaab, sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in Ciidamada cadaanka ah iyo kuwa soomaalida ay ku soo dageen banaanka deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayan deegaanka lug ku soo galeyn.
Dagaal yahano katirsan Al-shabaab oo ku sugnaa Mubaarak ayaa dagaal kala hortagay ciidamada Cadaanka iyo kuwa soomaalida, ilaa hada lama sheegin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaaasi,balse dadka ku dhqan Mubaarak ayaa sheegaya inuu jiro qasaare soo kala gaaray labada dhinac.
Dhanka kale barta ay ka Twitter-ka ku leedahay Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa lagu shaaciyay in Xalay hawlgal qorsheysan laga fuliyay deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose,islamarkaana lagu dilay xubno katirsan Al-shabaab.